Soo dejisan IObit Uninstaller 6.0.2.156 – Vessoft
Soo dejisan IObit Uninstaller
IObit Uninstaller – software ah ku anfacaya in ay ka saarto ee loo baahnayn software, darfahoodii, plugins iyo qaybaha ee Windows. IObit Uninstaller u aragto barnaamijyada lagu rakibay, oo iyaga lagu yeesho ay taariikhda ku rakibidda, size ama inta jeer ee la isticmaalo oo awood u qaadidda degdeg ah barnaamij ka nidaamka. Software ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah hab ka mid ah xaqiijinta awood badan kuu ogolaanaya inaad si meesha looga saaro dhamaan macluumaadka laga diiwaanka. IObit Uninstaller abuuraa hal dhibic ka soo celin, kaas oo u ogolaanaya in la sameeyo nidaamka soo celiyaan in ay dhacdo dhibaato. Software waxay leedahay interface ku ogaado iyo fududahay in la isticmaalo.
Bixisaa software aan loo baahnayn
Tirtirtaa dhammaan macluumaadka ku saabsan software ka diiwaanka
System soo celiyo
Interface fudud oo dareen leh
Comments on IObit Uninstaller:
IObit Uninstaller Software la xiriira:
Razer Game Booster 6.4.6.1093
Ayna System Games Tool si loo hagaajiyo waxqabadka nidaamka iyo tayadoodii gameplay ah. Software wuxuu kuu ogol yahay in ay fuliyaan ayna ku hab toos ah ama buuga.
English, Français, Español, Deutsch... Carambis Software Updater 2.3.0.5412 Pro iyo 2.0.0.1322 Standard
Ayna System qalab The universal in la helo versions cusub ee software-ka ku rakiban. utility ayaa wax ku ool ah uu baaritaanku habka iyo bandhigayaa liiska software talinayaa cusboonaysiinta.
English, Українська, Français, Español... Revo Uninstaller Pro 3.1.5
Ayna System Aalad awood leh si ay u nadiifiyaan tayadoodii nidaamka. Software The kuu ogolaanayaa inaad si aad u nadiifiso nidaamka off faylasha loo baahnayn iyo qabtaan qaadidda buuxda oo software.
العربية, English, Українська, Français... Carambis Cleaner 1.3.3.5315
Ayna System Agabka in ay u adeegaan oo hagaajiyo waxqabadka nidaamka. software The awoodo si uu u xaliyo khaladaadka ku jira nidaamka iyo nadiifiso diiwaanka ka soo qashinka.
English, Français, Español, Deutsch... CCleaner 5.22.5724 Standard, Professional iyo Portable
Ayna System software A caan ah si aad u nadiifiso iyo tayadoodii nidaamka. software The kuu ogolaanayaa inaad si loo soo saaro xogta diiwaanka iyo nadiifiso taariikhda hawlaha internet-ka.
العربية, English, Українська, Français... SystemBoosterPro 10.1
Ayna System Tool in ay tayadoodii iyo in la kordhiyo waxqabadka nidaamka. Software ayaa si toos ah baadhaa dhibaatooyinka nidaamka iyo ogolaanaya in la saxo qaladaad.
English, Français, Español, Deutsch... Auslogics Registry Cleaner 6
WTFast 3.5.9.511 iyo 4.0.5.616 beta
Ayna System Games Tool in ay kordhiyaan xawaaraha gudbinta xogta dhexeeya your computer iyo server ciyaarta. Barnaamijku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si ay u hagaajiyaan xawaaraha la xidhiidha in kulan oo caan ah oo kala duwan ah.
English, Français, Español, Deutsch... Wise Disk Cleaner 9.31 Standard iyo Portable
Ayna System Agabka in ay tayadoodii iyo nadiifiso nidaamka ka files aan loo baahnayn. software The kuu ogolaanayaa inaad tirtirto faylasha ku meel gaar ah oo loo sameeyo defragmentation aad disk adag.
العربية, English, Українська, Français... Windows Repair 3.9.12 Standard iyo Portable
Ayna System Software inuu ka soo kabsado shaqada adeegyo muhiim ah oo xuduudaheedu nidaamka. Software canaanto khaladaadka diiwaanka iyo nidaam faylasha u kharribmay.
Kaspersky 2016 16.0.0.614 Internet_multi_device, Total_security, Antivirus...
العربية, English, Français, Español... HOA Tracking Database 2.4.5
Saxannada Software ayaa si aad u eegto warbixinta buuxda oo ku saabsan qaabka file ah disk adag iyo niyad san meel disk ah. Software waxay bixisaa dhawr qoraal kala duwan si ay u soo bandhigaan qaab-dhismeedka content ku disk ah.
العربية, English, Français, Español... Eeg software more
Opera 40.0.2308.81, 41.0.2353.10 beta iyo 42.0.2374 dev